Our School – PINMA
၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်သည်။
Grade9Admission
နိုင်ငံတော်၏တာဝန်များကို ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ အများနှင့်အညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးရန်။
တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုအပြည့်ဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်ကာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်သော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများဖြစ်လာစေရန်။
တည်ထောင်အုပ်ချုပ်သူ၏နုတ်ခွန်းဆက်စကား ပင်မကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း Website က ကြိုဆိုနုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။
ပင်မကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပေးဆောင်နေသော၀န်ဆောင်မူများကို အသေးစိတ်သိရှိနိုင်စေရန်အတွက်ကျောင်းwebsite ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်မွမ်းမံဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ ၁၉၉၂-ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ပင်မကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းဟာ မန္တလေးမြို့မှာထင်ရှားကျော်ကြား လူသိများတဲ့ ကျောင်းတကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ကျောင်းက အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများဟာ အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအသီးသီးမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့တာ၀န်အသီးသီးကိုရယူပြီးနိုင်ငံတော်၏တာ၀န်များ ကိုကျေပွန်အောင်ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေကြသလိုနိုင်ငံတကာကိုလည်းအထောက်အကူပြုလျက်ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကျောင်းက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများဟာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာမိမိတို့ရရှိသော အောင်မြင်မူများနှင့် မိခင်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဂုဏ်ကို ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တက္ကသိုလ်၀င်တန်းစာမေးပွဲတွင် ရရှိထားသော သာလွန်ကောင်းမွန်သည့် အောင်မြင်မူမှတ်တိုင်များကသက်သေခံလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအောင်မြင်မူမှတ်တိုင်များစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာ ကျောင်းကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ တည်ထောင်အုပ်ချုပ်သူများ၊ တာ၀န်ထမ်းဆောင်ခဲ့၊ ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်သော ကျောင်းအုပ်ကြီးများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသားမိဘများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများရဲ့ တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားအားထုတ်မူများကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများရဲ့ သင်ကြားသင်ယူမူ၀န်းကျင်မှဦတွေ့ကြုံနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် ဆန်းသစ်တဲ့ သင်ကြားသင်ယူမူ၀န်းကျင်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင် အတူတကွ ကြိုးစားအားထုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပညာရေးမူ၀ါဒဟာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းများကိုဖော်ထုတ်ပြီး သူတို့နှင့်သင့်လျော်သောအခွင့်အလမ်းကောင်းများအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာသင်ယူနိုင်အောင် ကူညီပေးရမှဦဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျွန်မတို့ ပင်မကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းက ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ၂၁-ရာစုပညာရေးရဲ့ အဓိကအရေးပါတဲ့
၁။ ဆက်စပ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်
၂။ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်နားလည်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ရန်
၃။ စိတ်ကူးကောင်းများနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်သော စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်
၄။ မိမိကိုယ်ကို လူကောင်းလူတော် တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန်။
၅။ တာ၀န်သိ၊ တာ၀န်ခံတတ်သောနိုင်ငံကြီးသားများဖြစ်လာစေရန်
၆။ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေသော နည်းပညာများကို တတ်သိနားလည်စေရန် တို့ကိုအထူးအလေးထား လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ပင်မကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မူတွေကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်သလို ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကလည်း မိမိတတ်မြောက်ထားသောပညာဖြင့်မိမိပတ်၀န်းကျင်၊ မိမိအသိုင်းအ၀ိုင်း ကောင်းမွန်တိုးတက်ရေးအတွက် ကျရာအခန်းကဏ္ဍကနေပြီးစွမ်းစွမ်းတမံ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ကျွန်မတို့ ပင်မကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကို ယုံကြည်စွာအပ်နှံခဲ့ကြသော၊ အပ်နှံနေကြသော မိဘများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူဟောင်းများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ၀န်ထမ်းများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဆက်လက်ပြီး ပံ့ပိုးကူညီထောက်ပံ့ပေးကြပါရန်လေးစားစွာ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။
ထူးချွန်ထက်မြက်သူများသည်ဘဝ၏တိုးတက်ရာ၊ တိုးတက်ကြောင်းအခွင့်လမ်းကောင်းများကို အမြင်ကျယ်ကျယ်ဖြင့် ကြည့်မြင်တတ်ကြပါသည်။
ပြုမူ၊ ပြောဆို၊ တွေးခေါ်တိုင်း ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ လုပ်ကိုင်တတ်သူသည် အများ၏ယုံကြည်လေးစားမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကောင်းအမြင်နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်လိုခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို ခေတ်နှင့်အမှီ အမြဲတိုးတက်စေပါသည်။
အကောင်းဆုံး၊ အမှန်ဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွအောင် တွန်းအားပေးမှုသည် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
အနာဂတ်ကိုမြော်မြင်ပြီးဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိနေရမည်။
ပညာအတွေး၊ ကောင်းမွန်ရေး၊ မနှေးရည်ဖေါ်၊ ပင်မကျောင်းတော်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများလိုက်နာမည့် စည်းကမ်းချက်များ
ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသည် ကျောင်းသို့ ကျောင်းတတ်ချိန်ထက် အနည်ဆုံး (၁၅)မိနစ်စော၍ ရောက်ရမည်။
ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသည် သတ်မှတ်ထားသော ပင်မကျောင်း၀တ်စုံ တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ၀တ်ဆင်၍ ကျောင်းသို့လာရမည်။
ကျောင်းစီးရှူးဖိနပ်၊ ကင်းဘတ်ဖိနပ် (သို့မဟုတ်) ညှပ်ဖိနပ်အပါးသာ စီးရမည်။
ကျောင်းသားများသည် ဆံပင်ကို ဘိုကေတိုတိုပါးပါးသာ ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ဆံပင်အရောင်ဆိုးခြင်း၊ နားဖောက်ခြင်း၊ နားကပ်ပန်ခြင်း လုံး၀ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ပုဆိုးကိုလည်း စနစ်တကျ၀တ်ဆင်ရမည်။
ကျောင်းသူများသည် ဆံပင်အရှည် (လည်ကုတ်အကျော်) ထားပါက အနက်ရောင် ခေါင်းစည်းနှင့် စည်းနှောင်ထားရမည်။ နဖူးပေါ်သို့ ဆံပင်မကျရ။ အနက်ရောင်ကလစ်နှင့် ထိုးတွယ်ထားရမည်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးပါက ဆံပင်ကို တဘက် (သို့) လေမှုတ်စက်ဖြင့် ခြောက်သွေ့ အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဆံပင်ဖားလျားချထားခြင်း လုံး၀ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ မျက်နှာကို သနပ်ခါးမှလွဲ၍ မည်သည့် အလှပြင် ပစ္စည်းမျှ လိမ်းချယ်ခွင့် မပြုပါ။ လက်သည်းခြေသည်းများ အရှည်ထားခြင်း၊ ဆေးဆိုးခြင်းတို့ကို လည်းလုံး၀ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
အတန်းထဲတွင် အုပ်ချုပ်သူ ဆရာဆရာမများ၊ သင်ကြားပြသသည့် ဆရာဆရာမများ၏ ညွှန်ကြားမှုများကို တိကျစွာလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး ဆရာ၊ ဆရာမများကို မလေးစားသည့် အမူအရာ ပြသခြင်း လုံး၀မပြုလုပ်ရ။
စာသင်ချိန်၊ စာကြည့်ချိန်များတွင် စကားများခြင်း၊ ငြင်းခုံခြင်း၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း လုံး၀မပြုလုပ်ရ။ မကျေနပ်ချက်ရှိပါက အုပ်ချုပ်သူ ဆရာ၊ ဆရာမများကို တိုင်ကြားပြီးဖြေရှင်းရမည်။ စာကျက်သည့်အခါ ဘေးလူ အနှောက်အယှက် မဖြစ်အောင် ကျက်ရမည်။
အတန်းတွင်းနေ့စဥ်လေ့ကျင့်သည့် အခါ၌လည်းကောင်း၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်အခါ၌လည်းကောင်း၊ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုက်နာလေ့ကျင့်ဖြေဆိုရမည်။
ကျောင်းတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်း၊ မူးယစ်ရမ်းကားခြင်း လုံး၀မပြုရ။
အတန်းတွင်းပြစ်မှုတစ်ခုခု ကျူးလွန်ပါက အုပ်ချုပ်သူ ဆရာဆရာမများကပေးသည့် အပြစ်ဒဏ်ကို ပထမဦးစွာ ခံယူရမည်ဖြစ်ပြီး အုပ်ထိန်းသူမိဘများကို ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံသတိပေးမည်။ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖြစ်ပါက အုပ်ထိန်းသူမိဘများကို ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံ သတိပေးမည်။ တတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါက ကျောင်းမှ ထုတ်ပယ်သည်ထိ အရေးယူခံရမည်။
ကျောင်းသားနှင့်ကျောင်းသူ မရိုးသားသည့် စကားအပြောအဆို၊ အပြုအမူတွေ့ရှိပါက သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ ကျောင်းမှထုတ်ပယ်သည်ထိ အရေးယူခံရမည်။
တက်တူးထိုးထားသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ကျောင်းအပ်လက်ခံမည် မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းအပ်ပြီးမှ တက်တူးထိုးထားသည်ကို တွေ့ရှိပါကလည်း ကျောင်းမှအပြီးထုတ်ပယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အုပ်ချုပ်သူ ဆရာဆရာမများ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မည်သည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူကိုမျှ ကျောင်း၏ပြင်ပသို့ လုံး၀မထွက်ရ။ တိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာသွားပါက လုံး၀ပြန်လည်လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
အုပ်ချုပ်သူ ဆရာဆရာမများ၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မည့်သည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူကိုမျှ မိဘများက ပြင်ပသို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်း မပြုရ။
အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ကျောင်းပျက်ကွက်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ အတန်းပိုင်ဆရာ၊ ဆရာမထံသို့ ခွင့်စာပေးပို့ တိုင်ကြားရမည်။
ကျောင်းသင်ခန်းစာနှင့် မသက်ဆိုင်သော စာအုပ်စာတန်းများ၊ ပစ္စည်းများ၊ ပို့စကဒ်များ၊ အော်တိုစာအုပ်များ၊ MP3, MP4, Phone, Cameraနှင့် အခြားကစားစရာပစ္စည်းများ၊ ချွန်ထက်ထိရှနိုင်သောပစ္စည်းများကို ကျောင်းသို့ ယူဆောင်လာခြင်းမပြုရ။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအချင်းချင်း ၀ယ်ခိုင်းမှာယူခြင်းလည်း မပြုရ။ တွေ့ရှိခဲ့လျှင်အုပ်ချုပ်သူ ဆရာဆရာမများက သိမ်းဆည်းပြီး လုံး၀ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
လက်၀တ်ရတနာနှင့် အခြားအဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို ကျောင်းသို့ယူဆောင်လာခြင်း၊ ၀တ်ဆင်ခြင်း မပြုရ။
ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါရှိသူများကို ကျောင်းအပ်လုံး၀လက်မခံပါ။ မိမိတွင်ဖြစ်တတ်သော၀ေဒနာများကိုကျောင်းအပ်စဥ်ကတည်းက အုပ်ချုပ်သူဆရာဆရာမများကို သေချာရှင်းလင်းပြောပြထားပါ။
ကျောင်းချိန်အတွင်း ကျန်းမာရေးမကောင်းပါက အုပ်ချုပ်သူဆရာဆရာမများကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ကျောင်းက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သော စည်းကမ်းများကိုလည်း လိုက်နာရမည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ကျောင်းစတင်ဖွင့်ချိန်မှစ၍ နောက်ဆုံးစာမေးပွဲကြီးပြီးဆုံးသည်အထိ ကျောင်းစည်းကမ်းများကို တိကျစွာလိုက်နာပြီး ကျောင်းကစစ်ဆေးသော စာမေးပွဲအားလုံးကို ဖြေဆိုရမည်။
ပညာသင်စရိတ်၏ ပထမအရစ်ပေးသွင်းမည့်ငွေကို ကျောင်းအပ်သည့်နေ့တွင် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအရစ်ပေးသွင်းရမည့် ငွေကို ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံးထားပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်၍ ကျောင်းကထုတ်ခံရလျှင်ဖြစ်စေ၊ မိမိဆန္ဒအလျောက် ကျောင်းကထွက်လျှင်ဖြစ်စေ ပညာသင်စရိတ်သွင်းပြီးငွေကို လုံး၀(လုံး၀) ပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။
No(70). 85th Street, between 32nd & 33rd street, Mandalay,Myanmar.
Mandalay-Pyin Oo Lwin Road, Aung Pin Lal, Mandalay, Myanmar
+95 02 403 4756
© Copyright 2021 Pinma Private High School. A glance of Zeagwat, Inc.